अवहेलना भएको भन्दै पूर्व उपराष्ट्रपतिद्वारा गणतन्त्र दिवस बहिस्कार ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
(May 28, 2016)
अवहेलना भएको भन्दै पूर्व उपराष्ट्रपतिद्वारा गणतन्त्र दिवस बहिस्कार !
१५ जेष्ठ २०७३, शनिबार ००:००
काठमाडौं । पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शनिबार बिहान सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा आयोजित कार्यक्रम बहिस्कार गरेका छन् । अनलाइन खबरमा उल्लेख समाचार अनुसार शनिबार बिहान सरकारले आयोजना गरेको गणतन्त्र दिवस बनाउने कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति झा राष्ट्रिय पोशाकमा सजिएर मञ्चमा आइपुगेका थिए ।
उनी मञ्चमा केहीबेर यताउति घुमे । र, आफूलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था नगरिएको भन्दै रिसाएर तत्कालै फर्किए । कार्यक्रम बहिस्कार गरेर फर्किने क्रममा उपराष्ट्रपति झाले आफ्नो अवहेलना गरिएको गुनासोसमेत पोखे । फर्कन लागेका पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई सरकारी अधिकारीहरुले फकाएर मञ्चमा राख्ने प्रयास गरेका थिए, तर उनीहरु असफल भए ।
सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा टुँडीखेलमा औपचारिक समारोहको आयोजना गरेको छ । समारोहमा राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली , उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख ओनसरी घर्ती लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थति रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: May 28, 2016
नेपाल टी-२० खेल्ने ६ टिमको तय
रवीन्द्र मिश्रले विवेकशील साझाको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए
भारतीय गृहणीले खानीमा फेला पारिन हिरा
बालेन शाहले सबैभन्दा बढी मत काठमाडौं महानगरको कुन कुन वडा बाट पाए ?